Faah Faahin:Dagaallo Gaadiidka Looga Gubay Ciidamada AMISOM oo Ka Dhacay Duleedka Degmada Awdheegle Sh.Hoose.
Thursday August 13, 2015 - 20:42:29 in Wararka by Super Admin
Warar faah faahsan ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo maanta gelinkii dambe deegaanno katirsan gobolka shabeelaha Hoose ku dhaxmaray ciidamada mujaahidiinta iyo kuwa shisheeyaha AMISOM.
Wararka ka imaanaya shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in ciidamo katirsan Afrikaanta oo ka amba baxay deegaanka No.50 ay isku dayeen in ay duullaan ku qabsadaan degmada Awdheegle iyo deegaanka Mubaarak.
Dagaallo culus ayaa lagusoo waramayaa in ciidamada mujaahidiintu ay kala hortageen ciidamada cadawga,ilo wareedyo ayaa sheegaya in mujaahidiintu ay dagaalka ku gubeen laba gaari oo nuuca Taawga loo yaqaan ah.
Wariye ku sugan goobta dagaalka ayaa soo sheegay in ciidamda shisheeye ay dib ugusoo laabteen No.50 oo ah halkii ay ka duuleen iyadoona ciidamada mujaahidiintu ay difaacdeen goobihii lagu dagaalamay ee Awdheegle iyo Mubaarak.
Horraantii bishii Ramadaan ayay aheyd markii ciidamada Mujaahidiintu ay dib u qabsadeen Awdheegle iyo deegaanada hoos yimaad xilligaasi oo ciidamada shisheeye iyo Maleeshiyaadka DF-ka isaga carareen tan iyo wixii ka dambeeyay dagaalkii Taariikhda galay ee Leego.